Netherlands vs Czech Republic Euro 2021 Amụma na Betgba Ndụmọdụ Ndụmọdụ Nyocha - latabernasanlucar.com
Netherlands vs Czech Republic ga-abụ egwuregwu nke atọ na ọkwa knockout na Euro 2020. A ga-eme Netherlands na Czech Republic na June 27 na 1800 elekere Central Eastern European Summer Time na Puskás Aréna na Budapest, Hungary.
Tupu egwuregwu mbụ ha na European Championship megide Ukraine, Netherlands nọ n’ụzọ dị mma iji merie egwuregwu 3, na-ese 1 ma na-efunahụ 1. Mana ihe na-atọ ụtọ bụ ọtụtụ ihe mgbaru ọsọ Die Oranje gbara. Ndi Netherlands meriri goolu iri na isii n’egwu ise ndia nke putara ihe dika 3.2 ihe mgbaru ọsọ. N’oge a, enyeghị ha naanị goolu anọ.
Ma na Euros Frank De Boer azala ndị nkatọ ya site na ịchọta usoro mmalite ya zuru oke yana arụmọrụ na-akwado nkwenye na ogo nke otu egwuregwu a.
Ọ bụ ezie na Netherlands malitere na nhazi nke gụnyere ụmụ nwoke 3 na-agbachitere o meriri ihe mgbaru ọsọ 8 na egwuregwu 3 nke bụ ihe mgbaru ọsọ kachasị elu nke otu ọ bụla meriri na otu egwuregwu nke Euro 2020.
Netherlands nwere ọnụọgụ nke atọ kachasị elu na ebumnuche.
N’ikwu okwu agbachitere, ndị otu Netherlands nwere ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke mgbapụta bọọlụ n’oge ọkwa otu.
Emebere Netherlands na nhazi 3-4-3. Ndị Netherlands na-enwe mmasị igwu ụdị egwuregwu bọọlụ. A gosipụtara nke a na stats yana Netherlands bụ ndị otu 3rd nwere ọnụọgụ kachasị nke emechara emechara n’oge ọkwa otu.
N’agbanyeghị mmasị ha maka igwu ụdị egwuregwu bọọlụ, Netherlands anaghị agabiga. Ndị otu a maara nke ọma na ịgafe ngwa ngwa iji mebie usoro mmegide na iji ohere.
Anyị nwere ike ịhụ nke a gosipụtara na ọnụọgụ yana Netherlands nwere ọnụọgụ nke anọ kachasị elu nke mbọ na ebumnuche ndị agbadoro anya n’oge ọkwa otu.
Netherlands nwere xG dị elu nke 3.4 ihe mgbaru ọsọ kwa egwuregwu n’oge otu egwuregwu. xG bụ ihe puru omume nke ohere nwere ike ime ka ị nweta ihe mgbaru ọsọ.
Ndị otu Netherlands nwere obere adịghị ike n’agbanyeghị, ha na-enwe ike ịwakpo ha site na nku ha n’akụkụ aka ekpe.
Netherlands Predreded Line maka Netherlands vs Czech Republic
Ntughari gaa azụ 3 site na ike ọ ga-abụ na enweghị Virgil van Dijk. Virgil Van Dijk nyere nkwado siri ike na azụ mana enweghị ya ahapụwo etiti ahụ ka ọ na-enwekarị ọgụ site na nku.
Na enweghị Virgil Van Dijk, Stefan De Vrij yiri ka ọ bụ onye mbụ ịhọrọ etiti. De Vrij na-amalite dị ka etiti aka nri n’akụkụ aka nri ebe Daley Blind na-amalite dị ka aka ekpe.
Mgbe oge nkụda mmụọ na Juventus gasịrị, De Ligt na-adaberekarị na Jurriën Timber. Mana n’oge Euro 2021 De ligt ka eburula Timber maka egwuregwu 2 Euro 2020 ikpeazụ ma ọ gosipụtara mkpebi a ziri ezi.
Patrick Van Anholt na Denzel Dumfries ga-abụ ndị aka ekpe na nku aka nri n’azụ. Ha abụọ na-awakpo ndị egwuregwu egwu ma mepụta ọtụtụ ohere maka otu ha site na mbara. Dumfries dị ebube maka Die Oranje na-atụle okpukpu abụọ ma na-enyekwa otu aka na egwuregwu 3.
Mgbe ndị Netherlands wakporo ndị egwuregwu abụọ a na-etolite ihu 5 na atọ na-aga n’ihu ebe ndị ọzọ na-etiti egwuregwu 2 na-anọ ntakịrị n’ihu.
N’etiti olulu Frankie De Jong na Marten de Roon bụ ndị na-ahọrọ bọọlụ nke mbụ na-echekwa azụ atọ ka ha na-aga n’ihu bọọlụ ahụ. Nwa Ryan 19, Ryan Gravenberch, amaka na ọrụ a yana Netherlands nwekwara ike ịdabere na Davy Klaassen nwere ahụmịhe nke nwere ọnụọgụ nke abụọ kachasị elu na ndị otu egwuregwu mgbe Daley Blind gasịrị.
N’ihu n’ihu ka anwansi ahụ na-eme. Georginio Wijnaldum na-amalite tupu etiti ahụ wee rụọ ọrụ dị ka ụzọ okike maka ndị mwakpo abụọ ndị ọzọ. Winjaldum abụghị naanị mma na imepụta ohere ịme goolu kamakwa na ịlele ha.
Memphis Depay na-ebido mgbe niile ma na-arụ ezigbo ọrụ. Ọganihu ọzọ nke malitere na egwuregwu 2 mbụ bụ Weghorst.
Donyell Malen dị afọ 22 bụ nhọrọ nke abụọ mgbe Weghorst gasịrị mgbe o nyesịrị 2 enyemaka na egwuregwu 3 ma nwee mmasị na egwuregwu ahụ megide North Macedonia, ya ejula gị anya ma ọ bụrụ na ọ malitere na ebe Weghorst.
Netherlands nwekwara ike ịkpọku Luuk de Jong nwere ahụmịhe na Quincy Promes ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
N’ịga na Euro, Czech abụghị n’ụzọ zuru oke. Ha na-egwu egwuregwu 5 tupu euro ma merie naanị 2 n’ime egwuregwu ndị ahụ, tụfuru 2 wee dọta otu egwuregwu. Ha abughi ezigbo ihe n’ihu ihe mgbaru ọsọ ahụ, na-atụle naanị ihe mgbaru ọsọ 1 kwa egwuregwu na egwuregwu 4 ikpeazụ ha ma nyefee ihe mgbaru ọsọ 7 na egwuregwu ndị a.
Czech na-eme ihe ngosi dị mma n’oge otu a. Ha ruru ntozu nke knockout site na imecha nke atọ na otu D. Ha nwere otu akara nke akara dị ka Croatia (4) wee mechaa otu egwuregwu site na mmeri 1, 1 dọọ na 1. Czech chebere naanị ihe mgbaru ọsọ 3 n’oge egwuregwu atọ a mana kwadoro naanị 2.
Czech nwere adịghị ike ụfọdụ dị mkpa iji rịba ama. Ha na-adighi ngwa ngwa na-agba ọsọ n’azụ azụ ha site na ndị na-awakpo ngwa ngwa karịsịa site na mbara ma ha enweghị kpọmkwem ụlọ ọrụ kachasị nwee ọgụgụ isi nke na-eme ka ha dị mfe na azụ.
Netherlands vs Czech Republic Euro 2021 Amụma
Oge ikpeazụ ndị otu abụọ a na-egwurị egwu bụ na 2015 maka asọmpi Euro 2016 nke bụ afọ isii gara aga. Ha chere ihu na ibe ha na 2005 tupu nke ahụ.
Ọtụtụ ihe nwere ike ịgbanwe na ogologo oge dị otu a ka anyị wee gwa gị ka ị leghaara isi isi ọnụ ọgụgụ maka egwuregwu Netherlands na Czech Republic na Euro 2020.
Anyị ga-adabere na amụma anyị maka Netherlands na Czech Republic na usoro ndị a:
Formdị nke otu abụọ tupu na n’oge Euro 2020 Usoro nke otu ọ bụla adịghị ike na ike nke otu ọ bụla Na-enyocha otu otu ọ bụla nwere ike isi merie
Nke a bụ amụma ndị anyị nwere maka Netherlands na Czech Republic dabere na nkatọ ndị a:
A ga-enwe ọtụtụ goolu na egwuregwu a. Netherlands gbara ndị kachasị goolu n’oge a na-eme otu egwuregwu na ha ga-achọ ịmatakwu. Schick ga-anwa itinye akara isi na Czech.
Czech ga-anwa iji ohere ohere Netherlands na-ahapụkarị na azụ na mpaghara sara mbara, ọkachasị n’aka ekpe. Van Anholt ga-enwe mmegide ozugbo ọ bụla na mpaghara a.
Onye ọkpụkpọ ahụ ga-abụ Vladimír Coufal onye dịka anyị kwurula na mbụ, dị mma n’ịmepụta ohere isi site n’ọtụtụ.
Ndị Czech enweghị ike ịgbaba n’azụ nchekwa ha. Nke a pụtara na Depay na onye ọ bụla malitere n’akụkụ ya na mwakpo ga-asọ mmiri maka ohere ịchọta ihe mgbaru ọsọ n’ihi na ha dị mma na-agba ọsọ ndị a, ọkachasị na Wijnaldum nọ n’azụ ha bụ ndị magburu onwe ha ịmepụta ohere maka ụdị ịgba ọsọ ndị a.
N’ihe metụtara nọmba nke 3, Dumfries ga-adị oke egwu megide Czech n’ihi na ọ nwere ike zoro ezo n’azụ nchebe Czech site n’aka nri ma na-agafe obe maka ọgụ ahụ ma ọ bụ na-abanye n’ime maka ohere ohere.
Dabere na isi ihe ndị a, anyị na-atụ anya na Netherlands ga-emeri 3-1 na Schick iji merie Czech na Dumfries iji nye opekata mpe otu ihe na Netherlands.
Netherlands na Czech Republic Euro 2021 Nsogbu
Ndị na-ere akwụkwọ na-enye nsogbu ndị a maka Netherlands na Czech Republic egwuregwu gburugburu 16 na Euro 2020:
Netherlands 1.68Were 3.85Czech Republic 5.20
Dabere na nsogbu ndị a, anyị nwere ike ịhụ na Netherlands bụ ọkacha mmasị doro anya ma na-atụ anya mmeri site na ndị na-ere akwụkwọ.
Bookmaker na-enye Netherlands na Czech Republic na Euro 2020
N’echiche anyị, b-nzọ bụ otu n’ime ndị na – eme akwụkwọ egwuregwu kacha mma maka ịkụ nzọ na egwuregwu Euro 2020. Ha nwere onyinye cashback ugbu a nke na-enye gị € 1 azụ maka € 5 ọ bụla ị mere na nzọ na Euro 2020..
Netherlands na Czech Republic ịkụ nzọ Atụmatụ
Dịka anyị kwuburu na ngalaba amụma amụma Netherlands na Czech Republic nke isiokwu a, anyị na-ebu amụma na Netherlands ga-emeri 3-1. N’ihi oke nsogbu maka Netherlands anyị anaghị adụ gị ọdụ ka ị gafee na Netherlands n’ihi na ị gaghị enweta nnukwu uru site na ịkụ nzọ dị mfe.
A tụlere ihe kpatara nke a n’isiokwu anyị na sistemụ ịkụ nzọ bọọlụ na ịgba bọl bọọlụ ebe anyị na-atụle atụmatụ ndị nwere ike inyere gị aka ịzụlite usoro ịkụ nzọ bọọlụ nke gị ma mee nza bọọlụ bara uru.
N’ikwu nke a dị ka nkwarụ nkwarụ, oke / n’okpuru nhọrọ ịkụ nzọ nwere ike bụrụ uru bara uru ọ bụghị naanị maka egwuregwu Euro 2020 a n’etiti Netherlands na Czech Republic kamakwa ọtụtụ egwuregwu bọọlụ n’oge Euro na ọkacha mmasị na okpuru.
Ndị a bụ ụfọdụ ndụmọdụ ịkụ nzọ anyị nwere maka gị na Netherlands na Czech Republic egwuregwu na Euro 2020:
Egwuregwu handicap, Netherlands 0, Czech Republic 3, egwuregwu iji dọpụta. Nsogbu 7.20.Netherlands iji merie na otu abụọ ga-akara. Nsogbu 3.40Karịrị ihe mgbaru ọsọ 2.5 ka a gbatara n’oge egwuregwu ahụ na otu abụọ ga-akara. Nsogbu 2.23Netherlands iji merie na ihe mgbaru ọsọ 3.5 ga-emetụta. Nsogbu 4.20Denzel Dumfries iji akara na Netherlands iji merie. Nsogbu 7.20 Patrik Schick iji merie na Netherlands iji merie. Nsogbu 11.0
Euro 2020 amụma amụma maka egwuregwu ndị ọzọ knockout:
Anyị nwere amụma egwuregwu maka egwuregwu ndị ọzọ na agba nke 16 na Euro 2020. Enwere ike inyocha ha!
Vstali na Austria